Himalaya Dainik » ट्राफिक सिग्नलमा रातो र हरियो दुवै बत्ती बलेपछि…
ट्राफिक सिग्नलमा रातो बत्ती बले सवारी-साधन रोक्ने र हरियो बले हिँड्ने नियम छ । तर, हरियो र रातो एकैपटक बल्यो भने के गर्ने ? आजभोलि काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधन चलाउने चालकले यस्तै समस्या व्यहोरिरहेका छन् ।
बिहीबार साँझ बानेश्वर चोकमा यस्तै भयो । एकै पटक दुईथरी संकेत दिने बत्ती बलेपछि चालक अलमलमा परे ।
‘दुवै लाइट त बल्नु नपर्ने हो, त्यस्तो भइरहेको छ भने म मर्मत गर्नलाई भन्छु’
तर, अगाडि विजुलीबजारतिर जाने सवारी-साधन नरोकिएकाले शंखमुलपट्टिबाट बानेश्वर जाने गाडी रोकिए ।
ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले प्राविधिक समस्याले त्यस्तो हुन गएको बताए । ‘दुवै लाइट त बल्नु नपर्ने हो, त्यस्तो भइरहेको छ भने म मर्मत गर्नलाई भन्छु’, उनले भने, ‘यो मर्मत गर्ने जिम्मेवारी यातायात कार्यालयको हो ।’
उनका अनुसार उपत्यकाका ३१ ठाउँमा ट्राफिक लाइट राखिएका छन्, तीमध्ये ५ वटा बिग्रिएका छन् । स्राेतः अन्लाइन खबर
घर-परिवार त्यो स्थान हो जहाँ तपाईं आफ्नो सबै थकान भुलेर सहज महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईं कस्तो ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यसले कुनै फरक पार्दैन, केवल परिवारको साथ आनन्दका साथ बाँच्नको लागि परिवार एउटा उपयुक्त स्रोत हो । जब तपाईंको घरमा एउटा आमाबाबु र बच्चाहरू हुन्छन् त्यसलाई एउटा परिवार मान्ने गरिन्छ ।
यही परिवारले हामीमा खुसीको सञ्चार भर्छ भने त्यही खुसीमा नै हामीले सबै कुरा फेला पार्न सक्छौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि परिवारमा खुसीको सञ्चार भर्न सकिएन भने त्यसले खुसी भन्दा झमेला निम्त्याउन सक्छ । तर कसरी सञ्चार गर्ने त परिवारमा खुसीको ?
चिनियाँ नागरिकले किन खिचे एटीएमको सिरियल नम्बर ?
महिला असाध्यै रूचाउछन् यस्ता ७ किसिमका पुरुष
दिया विवाह अगाडी नै गर्भवती भएको तस्बिर बाहिरिएपछि….
आज फलिफाप छ ४ राशिको भाग्य, तपाईको कस्तो छ ? पढ्नुहोस्